Neymar Junior oo diiday inuu soo xaadiro tababarka kooxdiisa PSG ee kulamada fasaxa & sababta ka dambeysa. – Gool FM
Neymar Junior oo diiday inuu soo xaadiro tababarka kooxdiisa PSG ee kulamada fasaxa & sababta ka dambeysa.
(Paris) 2 Luulyo 2019. Weeraryahanka Paris Saint Germain Neymar Junior ayaa lagu soo warramayaa inuu diiday dib ugu soo laabashada kooxda si uu tababarka kulamada fasaxa ula qaato saaxiibadiisa, wuxuuna isku dayayaa inuu kooxdiisa ku qasbo in laga iibiyo Barcelona.
PSG ayaa fahamsan in xiddigaan heerka caalami uu nafsadiisa u bandhigay Balaugrana, waana markii ugu horreysay uu talaabadaan qaadayo tan iyo markii uu kooxda kusoo biiray laba sano ka hor, inuu ku laabto Camp Nou ayeyna tahay muhiimadiisa.
Wadahadalada labada kooxood ayaa goor hore bilowday, inkastoo ay wali tahay in la isku fahmo qadarka uu xiddiga kaga tagay Parc des Princess, hadana kooxda reer France waxey dooneysaa iney ku hesho xiddigaan lacag u dhaw ama u dhiganta middii uu sanado ka hor ugu yimid.
Wargeyska Sport ee laga leeyahay Catalonia ayaa baahiyay in Neymar uu cadaadis badan saarayo Paris maadaama uu diiday inuu kooxda inteeda kale kula biiro tababarka kulamada fasaxa kaas oo bilaaban doona isniinta soo aadan.
27-jirkaan ayaa sidoo kale diyaar u ah inuu diido safarka ay kooxda ku aadi doonto China isla markaana uu xoogga saaro sidii uu kaga soo kaban lahaa dhaawaca uu ku seegay Copa America.
Neymar 51-gool ayuu dhaliyay, 58-ciyaarood uu kooxdiisa u saftay dhamaan tartamada oo dhan tan iyo markii uu 2017 kusoo biiray kooxda.
Xiddig ka tirsan Liverpool oo fariin qiiro leh ku macsalaameeyay kooxda & taageerayaasha
Frank Lampard oo lasiin doono gunno ka dheeri ah mushaarkiisa hadii uu Chelsea usoo saaro Champions League.